Tsanangudzo:120W Monocrystalline Silicon Solar Panels,Customizable Monocrystalline Silicon Panels,Monocrystalline Silicon Solar Panels
Home > Products > Solar Module &amp; Panel > Monocrystalline Silicon Solar Panels > 120W Solar Monocrystalline Silicon Photovoltaic Panels
120W Monocrystalline Silicon Solar Panels [inosanganisira] yakasimba yepamusoro-silicon chipfeko inochengetedza simba rinogadziriswa nekusimbiswa nekugadzikana, kuongororwa kwakanaka kwehutano maererano nemitemo yepamhando yepamhizha yepamusoro, girasi rakakwirira rakajeka girasi yakachena uye kusagadzikana kweEVA kuchengetedzwa kwakasimba kwepaneti yebheteri, kushanda kwakasimba kune chengetedza simba rinobuda.
[Chigadziro Chinyorwa] Girazi remazuva, ganda rekugadzira mhepo, magetsi ezuva, kuparidzira kwezuva, yakakodzera kune marudzi ose emagetsi emagetsi, magetsi anotsvaga, magetsi emashambadziro, magetsi emagetsi, magetsi emumba, mavhiri emagetsi, akadai semapumpu ezuva, magetsi emigwagwa ezuva, mashoma emagetsi ezuva, nezvimwewo.
[Zviratidzo uye Kubatsira] Kuchinja kushandiswa kwepamusoro, kunyatsogadzirwa kunobudirira; Zvakanaka kuderera chiedza; High pephenekeri tempered girasi; Kushandura kwekombiki yekuita kuti zvikamu zvive zvakanaka uye zvakasimba zvinopesana nechando, kuisa nyore kwekombiki yekodzero yekudzivirira kudzima uye kushanduka kwemvura mukati megadziriro;
Zvinoshandiswa: kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kushandiswa nyore, kushandiswa kwehupfumi, kuratidza kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, mazuva ano, masayenzi uye tsika.
Shandisai chisimbiso chisina mvura chinoshandiswa muzvikwata zvakawanda kuti zvive nechokwadi chekushandisa zvakachengetedzwa kwezvikamu; nekunakidza kwakanaka kwemamiriro okunze, kuputika kwemhepo, kudzivirira kwechimvuramabwe; kunyatsopikisa kusviba uye kusvuta kwoutsi, kwete kunokonzerwa nenharaunda
Product Categories : Solar Module & Panel > Monocrystalline Silicon Solar Panels